Fironan’ny fifidianana – Antananarivo Renivohitra: mitarika vonjimaika ny kandidà A. Naina | NewsMada
Par Taratra sur 28/11/2019
An-dalana ho any amin’ny fiovan’ny tantara sy ny fivadihan’ny pejy ny eto Antananarivo Renivohitra. Mitarika hatrany, raha ny fironana amin’ny voka-pifidianana vonjimaika, ny kandidàn’ny IRK, Andriantsitohaina Naina.
Nisongadina ny fandresena miezinezina ho an’ny kandidà laharana fahefatra, Andriantsitohaina Naina, tamin’ireo birao fandatsaham-bato maromaron eto Antananariuvo Renivohitra. Anisan’izany ny tetsy Vasacoss. Nibata ny fandresena tamin’ny isam-bato 104 ny tenany raha 82 ny azon’ny kandidàn’ny Tim, Randriamasinoro Ny Riana. Tahaka izany koa ny voka-pifidianana sy ny fironana tetsy Vohibola. Nahazo vato 100 ny kandidàn’ny IRK raha 71 kosa ho azon’ny kandidàn’ny Tim.
Nifampitana teny amin’ny fokontany sasany
Na izany aza, nifampitana kosa ny kandidà roa tonta teny amin’ny birao fandatsaham-bato eny Ambohipo. Tsy nilafanalavitra ny elanelana na nitarika ny kandidà laharana fahefatra. Nahazo ny 33 raha 32 kosa ny an’ny kandidà laharana faharoa. Tahaka izany koa ny voka-pifidianana sy ny fironana tetsy Faliarivo Ambanidia. Nahazo isam-bato 79 ny avy amin’ny IRK raha 76 kosa ny an’ny Tim.
Efa mirona any amin’ny fiovana
Efa manomboka mirona any amin’izany fandresena izany ny hevitr’ireo akaiky ny kandidàn’ny IRK. “Mino aho fa ho tanteraka ny nambaran’ny kandidà Andriantsitohaina Naina hoe manomboka androany amin’ny fandatsaham-bato ny fiovana… Efa mazava ny fandresena, ohatra, ny eny amin’ny boriborintany fahefatra… Horaisina tsy ho ela ny fandresena ary ny haravoravoana ho an’ny vahoakan’Antananarivo ”, hoy ny lohandohany eo anivon’ny Vovonana Mapar, Andriamananoro Augustin.
Etsy andaniny, laharana fahatelo ny kandidà Rakotoariso Alban (Babà-Ganstabab) amin’ireo voka-pifidianana rehetra eto an-dRenivohitra. Tsy hita tabilao na zara fa mahazo vato kosa ireo kandidà roa hafa, mpifaninana eto Antananarivo.